Aureus emphinjeni - Kuyaziwa. Lokhu bacterium buye baba ingxenye ebalulekile microflora womuntu. Silwanyana isebenze nge ukwehla amasosha omzimba, futhi Ukuwohloka impilo.
Staphylococcus aureus emphinjeni, izimpawu iluphi okuzoxoxwa ngalo ngezansi, kubhekwa ayingozi kakhulu nasezihlotsheni zakhe, kwaba khona kwakhe kunomthelela kwetinhlavu ubovu namathansela, nge yezinkinga zayo isikhonzi.
Aureus emphinjeni wengane
Lokhu umzimba kudala izinkinga, njengoba kushiwo ngenhla, iziguli abanamasosha omzimba abuthaka, kanye izingane nasebekhulile. Futhi sina ndaba wukuthi iningi abezindaba ngisho nokuwabona ukutheleleka yabo, ngakho abavikelwe futhi musa ukuvikela ukutheleleka okuthile okulimazayo ezihlotsheni zawo. Futhi esikhathini esiningi namagciwane ukusabalala staph kungenxa nokungahlanzeki. Kodwa igciwane angadluliselwa by amaconsi sisemoyeni, noma ingane kunina e utero.
Staphylococcus emphinjeni, izimpawu
Ngokuvamile, igciwane icuphe izifo ezihlukahlukene ezingalapheki, ezinzima ubovu ukutheleleka. Small umzimba-inkathazo uthanda uthuthe ephuma emzimbeni ngaso leso emzimbeni, kusukela uhlelo uhlelo. Ngakho emphinjeni, cishe, ngeke elinganiselwe. Kuyinto kufuduka kuyingozi kakhulu kusukela emphinjeni ebuchosheni ukuthi kungabangela esabekayo isifo - meningitis. Kungase uthuthe kwezinye izitho ezibangela izifo ezifana endocarditis, inyumoniya, septicemia, osteomyelitis. Uma ukukhulelwa kwenzeka isifo nomntwana esizalweni ekuthuthukiseni sepsis. Staphylococcus aureus ukhiqiza ezinobuthi ezingaba nomthelela fetus kubangele pemphigus izinsana.
Simple yenethiwekhi silwanyana akusho ukulimaza umuntu, Staphylococcus izimpawu emphinjeni avele ngesikhathi egula kuphela. Ngaphezu kwakho konke, likhuphuka izinga lokushisa lomzimba, isiyezi elivela abukhali ukhuphuka uvela esihlalweni noma embhedeni. Throat kuba zokuzikhukhumeza, amalaka elibomvu futhi ekugcineni embozwe enamathela ubovu. Ukugwinya kubuhlungu, iphango wancipha. Palpation ivumela ukuhlola evuvukele kakhulu zamanzi. Xhumana nodokotela uma ithola okungenani eyodwa yalezi zimpawu, ingasaphathwa zonke. Tinkondlo ukwelashwa isikhathi isonto ngeke zikhishwe endaweni embi kangaka, futhi kuzosusa izimpawu.
Ukwelashwa nokuvikelwa Staphylococcus emphinjeni
Ukuze ubone ukuthi Amagciwane emphinjeni babelwe bakposev emphinjeni kanye nasopharynx.
Nquma aureus emphinjeni izimpawu ezibalwe ngenhla, ungavumeli. Waphatha i-ukungenwa amagciwane iningi amacala zenzeka ngemithi elwa namagciwane ngoba ukunqoba okusheshayo phezu igciwane, kanye ukuvimbela ongakhetha Ukuphinda. Nokho, lokhu silwanyana kakhulu ukumelana imiphumela emibi yeminye imithi elwa namagciwane, Staphylococcus ukhiqiza-enzyme ahlahlele esebenzayo izidakamizwa ingxenye. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba acabangele umphumela isidakamizwa isiguli. Ngakho-ke, uma igciwane ngamunye kuhilela ilungelo lomuntu ngamunye lokuzikhethela kusho ukubhekana ukutheleleka, kuye ngokuthi isisindo emzimbeni, iminyaka, Yiqiniso isifo. Qiniseka ukuba aqhube izifundo ekuthuthukiseni amasosha omzimba isiguli.
Typhus besisu: izimbangela, izimpawu kanye zokwelapha
Induna ebusweni. Laser ukwelashwa induna. Induna: izimbangela
Ukonakala Parenchymal. anatomy okukhwantabalisayo
Ukungafakwa ngaphambi isisu ukulethwa kanye nezici zayo eziyinhloko
Crossover Modern Hyundai IX35 kusukela automaker-Korean